June 2019 – Wararka Ciyaaraha Maanta
Xiddiga Eden Hazard ayaa dhawaan ku biiray kooxda Real Madrid taas oo soo afjartay hadal hayn socotay muddo 2 sano ah oo xiddiga reer Belguim lala xiriirinayay Los Bancos xilli uu ku rajo in uu
Kooxda Arsenal ayaa wadahadalo Rasmi ah la furtay kooxda PSG kuwaas oo ay kaga doonayaan daafaca Midig ee Thomas Meunier si ay ugu xoojiyaan kooxda xilli ciyaareedka dambe. Laakiin kooxda Arsenal ayay durba ka hor
Muarizio Sarri Oo Maamulka Juventus Ka Dalbaday Labadiisa Saxiix Ee Ugu Horeeya Xagaagan
Tababaraha Cusub ee kooxda Juventus ee Maurizio Sarri ayaa lagu soo waramayaa in uu doonayo in uu dhiso koox cusub xilli ciyaareedka dambe kadib markii uu si Rasmi ah tababare ugu noqday kooxda Juventus. Maurizio
Halyeeyga reer Holland ee Ruud Gullit ayaa kooxda Man United u sheegay in ay iska iloobaan saxiixa xiddiga daafaca kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan isaga oo u
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United ee Paul Pogba ayaa si weyn loola xiriirinayaa in uu isaga tagayo kooxda Man United isaga oo xitaa qirtay in uu doonayo in uu tartan cusub raadsado
Xulka Radamel Falcao ee Colombia ayaa garaacay xulka Lionel Messi ee Argentine todobaadkan xilli xulka Albiceleste guuldaro ku bilowday tartanka Copa America sanadkan. Lionel Messi ayaa mar kale la kulmay dhaleecayn kadib markii xulka qarankiisu
Xulka qaranka Brazil ayaa doonaya in ay hal lug lasii galaan wareega xiga marka ay caawa la ciyaari doonaan xulka Venezuela kulan ka dhici doona garoonka Arena Fonte Nova. Brazil ayaa kulanka soo galay iyaga
Kooxda Man United ayaa lagu soo waramayaa in ay dagsatay qorshe cajiib ah oo ay Man City ugu garaacayso saxiixa xiddiga daafaca uga ciyaara Leicester City ee Harry Maguire sida ay sheegayaan wararku. Kooxda Man
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Uruguay ee Luis Suarez ayaa ka hadlay suurtagalnimada ku soo laabashada Neymar ee kooxda Barcelona inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan. Suarez ayaa soo dhaweeyay
Wararka ka imanaya dalka England ayaa kashifay qorshe lama filaan ah oo ay kooxda Man United u dagsatay qaabkii ay xiddiga Khadka dhexe ee Paul Pogba ugu sii hayn lahayd kooxda ugana hor istaagi lahayd
Xulka qaranka Chile ayaa guul ku bilowday difaacashada koobka Copa America iyaga oo guul weyn ka gaadhay kooxda Japan kulan ka tirsanaa kulankii ugu dambeeyay ee wareegii 1-aad ee wareega Group-yada. Qaybtii hore ee ciyaarta
Wararka ka imanaya dalka Brazil ayaa sheegayaa in xiddiga reer Brazil ee Neymar si aad ah ugu dhaw yahay in uu ku soo laabto kooxda Barcelona maalin kadib markii madaxweynaha Kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaifi
United Oo Pogba Ka Dhigeysa Xiddiga Ugu Mushaarka Badan Kooxda , Sheeko Ka Soo Korartay Félix Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga .
Man United ayaa diyaarineysa qorshe ay doonayaan in Pogba kaga hor istaagaan in xagaagaan ka huleelo kooxda kaasi oo weyn loola xariirinayo in uu aadayo kooxda Real Madrid
Xiddiga reer Brazil ee Neymar ayuu shaki weyn soo galay mustaqbalkiisa kooxda PSG kadib markii uu Madaxweynaha PSG sheegay in aysan jirrin xiddig uu ka hor istaagayo in uu baxo haddii arintaas laacibka uu go`aansado
Pogba, Coutinho, Neymar, Griezmann, De Ligt, Dembele & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay kooxda Liverpool u soo bandhigtay saxiixa xiddiga garabka weerarka uga ciyaara ee Ousmane Dembele sida ay sheegayaan wararku. Barcelona ayaa Liverpool ogolaansho u siisay in ay u
Kooxda Man United ayaa markii 2-aad ku Hungawday baacsigii ay ugu jirtay saxiixa xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Crystal Palace ee Aaron Wan-Bissaka sida laga soo xigtay Sky Sport. Shabakada Sky Sport ayaa sheegaysa in
Kooxda chelsea ayaa kooxaha Atletico Madrid iyo Barcelona ka diiday dalab ay kaga doonayeen saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara ee Willian sida ay sheegayaan wararku. Blues ayaa diiday isku daygii ay Barcelona iyo Atletico Madrid
22 maalmood ayaa ka xiga wakhtigii ay kooxda Real Madrid ku soo laaban lahayd tabaabrka isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub ee 2019/2020. Xiddigaha 30-ka ah ee jooga kooxda ayaan sii joogi doonin kooxda marka la
Barcelona & Valencia Oo Ku Jira Wadahadalo Isku Badalasho Ah & Xiddigaha Ay Isku Badalanayaan Oo La Ogaaday.
June 17, 2019 kooxda 1
Kooxda Barcelona ayaan wali wax saxiix ah samayn xagaagan laakiin arintaas ayaa u muuqata mid is badalaysa iyada oo kooxda Barcelona wadahadalo kula jirto kooxda ka ciyaarta horyaalka La Liga ee Valencia sida ay sheegayaan
Maurizio Sarri Oo Maamulka kooxdiisa Cusub U Sheegay In Ay U Keenaan Laba Xiddig Oo Chelsea U Ciyaara.
Tababaraha Cusub ee kooxda Juventus ee Maurizio Sarri ayaa weerar ku qaadaya kooxdiisii hore ee chelsea maalmo kadib markii uu noqday tababaraha cusub ee kooxda Juventus. Tababare Maurizio Sarri ayaa doonaya in uu kooxda chelsea
Xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda West Ham iyo xulka qaranka France ee Issa Diop ayaa u jawaabay kooxda Man United kadib markii ay Red Devils dalab lacag iyo xiddig ah miiska u saartay kooxdiisa West
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho ayaa isaga tagi doona Kooxda Barcelona marka la gaadho suuqa kala iibsiga xagaagan laakiin iska diiday in uu ku biiro kooxda Man United sabab la